Robert Mugabe was relieved after resigning, mediator says - CBS News
Robert Mugabe was relieved after resigning, mediator says
November 26, 2017 / 5:42 PM / CBS/AP
CHISHAWASHA, Zimbabwe -- Zimbabwe's former President Robert Mugabe knew it was "the end of the road" days before he quit, and appeared relieved when he signed his resignation letter after 37 years in power, a Catholic priest who mediated talks leading to his ouster said Sunday.
Mukonori said Mugabe had to resort to "Plan B" -- an immediate resignation -- after Mnangagwa did not return from exile in South Africa at Mugabe's request.
Speaking to BBC News, Mukonori said Mugabe will continue to have a role to play in Zimbabwean politics, providing "advice" as an elder statesman to his successor. "In the African world, senior citizens are there for advice," Mukonori said.
The Associated Press interview at the Chishawasha mission church east of Harare, the capital, revealed some of the behind-the-scenes maneuvering at the frantic end of Mugabe's rule, which began with promise after the end of white minority rule in 1980 and unraveled under pressure from virtually all sectors of a society worn down by economic decline, government dysfunction and restrictions on basic freedoms.
Fidelis Mukonori, a Catholic priest who mediated talks with Zimbabwe's former President Robert Mugabe, stands inside his church, in Chishawasha, Sunday, Nov. 26, 2017. Bram Janssen / AP
First published on November 26, 2017 / 5:42 PM